Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Osimiri Tyrrhenian | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime oke osimiri nke bu akụkụ nke Oké Osimiri Mediterenian bụ Oke Osimiri Tyrrhenian. Oké osimiri a dị n'akụkụ ụsọ ọdịda anyanwụ nke oftali ma weere ya dị ka akụkụ nke Oké Osimiri Mediterenian. O nwere mpaghara ihe dịka square kilomita 106.000. Ọ bụ oké osimiri dị n'etiti ókè nke ọnụ ọgụgụ tectonic plate na Eurasia na Africa.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa njirimara na mkpa nke Osimiri Tyrrhenian.
1 Akụkụ nke Oke Osimiri Tyrrhenian
2 Akụkọ ihe mere eme na nke dị ugbu a
3 Gburugburu ala mmiri nke Osimiri Tyrrhenian
4 Ihe ndi di iche iche na umu egwu
Akụkụ nke Oke Osimiri Tyrrhenian
Ebe ọ bụ akụkụ nke oke osimiri nwere oke buru ibu, ịmachi oke osimiri a adịghị mfe. Ọ dị n'akụkụ Italy n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na mpaghara ndị dị Campania, Calabria, Tuscany, Basilicata na Lazio. Ọ dịkwa n'akụkụ ọdịda anyanwụ ya na Corsica Islands, nke bụ mpaghara French. Oke Osimiri Ligurian zutere Osimiri Tyrrhenian n'akụkụ akuku ugwu ọdịda anyanwụ. Ọ bụ ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke na-ezute Osimiri Mediterenian.
Ọnọdụ dị egwu na-egosi na ọ nwere ọtụtụ ntinye na ọtụtụ ntinye. Otu n'ime ụzọ ndị a bụ nke na-asọba n'oké osimiri Ligurian. Abụọ ndị ọzọ na-eduga n’Oké Osimiri Mediterenian na nke ọzọ n’Oké Osimiri Ionia.
Akụkọ ihe mere eme na nke dị ugbu a
Oké osimiri a arụwo ọrụ dị mkpa na ọdịbendị na ọha mmadụ n'akụkọ ihe mere eme. Karịsịa n'ihe banyere azụmahịa mba ofesi Oké Osimiri Tyrrhenian abụrụla ezigbo mkpa. Nke a bụ n'ihi ọnọdụ ọnọdụ ya dị. N'ihi ọnọdụ a, ụgbọ mmiri azụmahịa nwere ike isi na kọntinent ọwụwa anyanwụ dị iche iche jikọọ. Ọ bụ ezie na ogologo oge, oké osimiri a nwere nnukwu azụmaahịa na nrugharị nke ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri ahịa, oke azụmaahịa a na-eme na mmiri ndị a belatara n'ihi na ndị ohi na-achịkwa mmiri ahụ.
N’oge Napoleon ọ rụrụ nnukwu ọrụ dịka eji ya agba ụgbọ mmiri.
Ugbu a mkpa dị na-aga n'ihu yana ọrụ azụmahịa na njem njem na-egosi ụzọ bara uru maka ya. Kwa ụbọchị Osimiri Tyrrhenian na-enweta ọtụtụ ụgbọ mmiri na-azụ ahịa. Ọ ghọwokwa ebe ndị njem na-ewu ewu ebe ọ bụ ebe obibi n'ọtụtụ agwaetiti dị n'etiti oke ya na obodo ụfọdụ n'ụsọ osimiri. Fọdụ ebe nkiri kachasị ewu ewu na Osimiri Tyrrhenian dị na Sicily, Agwaetiti Aeolian, obodo Palermo na obodo Naples. Ebe nlegharị anya nke obodo a na-enweta ọtụtụ puku nleta kwa afọ. A gbakwunyekwara na nke a na azụmaahịa na njem njem.
Oke Osimiri Tyrrhenian dịkwa oke mkpa maka ọrụ ịkụ azụ. Ishingkụ azụ, yana ihe omume ndị ọzọ, bụ ndị nyere aka na nnukwu akụkụ nke akụ na ụba gbara ya gburugburu.
Gburugburu ala mmiri nke Osimiri Tyrrhenian
E kewara ala okpuru mmiri a n’oké osimiri abụọ. N'otu aka anyị nwere mbara Marsili na n'akụkụ nke ọzọ larịị Vavilov. Efere abụọ a dị n'akụkụ abụọ nke nnukwu àkwà mmiri a na-akpọ Issel. Oké osimiri a nwere omimi kachasị nke ihe dịka 12418 ụkwụ. N'ịbụ nke dị n'ókè nke efere tectonic abụọ, ọrụ ugwu mgbawa na-emetụta ọtụtụ ala. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ugwu na ugwu mgbawa dị n'okpuru mmiri karịa oke osimiri a ma na-arụ ọrụ, ebe a na-enweta ebe ndị njem nlegharị ka ukwuu.
Mpaghara a dum bukwara otutu agwaetiti, tinyere agwaetiti Aeolian, Ustica na agwaetiti Tuscan. Agwaetiti ndị mbụ dị n’ebe ugwu Sicily. Agwaetiti kacha ibu na mpaghara Tuscan bụ Elba.
Ihe ndi di iche iche na umu egwu
Ọtụtụ ụdị osisi na anụmanụ na-ebikọ ọnụ n'oké osimiri a. Speciesdị a bụ ihe na-eme ka ụlọ ọrụ ịkụ azụ na-aga nke ọma. Iji maa atụ, e nwere nnukwu mmiri mmiri, tuna tuna, bluefish na grouper. A na-echekwa mpaghara ugwu niile nke oké osimiri ka ọ bụrụ ebe obibi maka ụdị anụ mmiri ara Mediterenian. E nwere nchekwa mmiri nke gbasapụrụ ruo Osimiri Ligurian. Ebe a na-echekwa ụdị anụmanụ dị iche iche, n'etiti nke anyị na-ahụ ogologo whale pilot, sperm whales, dolphins bottlenose na whale azụ.
Dịka anyị kwurula na mbụ, Osimiri Tyrrhenian dị ezigbo mkpa n'okporo ụzọ azụmahịa dị na mpaghara. Site n'ije ozi dị ka ụzọ, eguzobela ọtụtụ obodo ọdụ ụgbọ mmiri n'akụkụ oke ala ahụ. Offọdụ obodo ndị ọdụ ụgbọ mmiri kacha mkpa dị bụ Salerno, Palermo, Bastia na Naples.
Otu n'ime egwu na anyị pụrụ ịchọta ahụkarị nke mmiri ecosystems anyị overfishing. Ọ bụ otu ihe egwu kachasị dị egwu na gburugburu ebe obibi mmiri na ụwa. Oké osimiri a agaghị ebelata. Ka ụlọ ọrụ ịkụ azụ na-etolite n'ihi mmụba ndị ahịa na-arịwanye elu, ndị ọkụ azụ na-aghaghi ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ nke ọtụtụ azụ kwa afọ. Azu azu a enweghi ike ikwere na ogologo oge nyere na ebighachi uzo obibi ebelatala. N'ihi oke azu a, ọnụọgụ mmadụ ejirila nwayọ jụ.
N'aka nke ya, oke ịkụ azụ mepụtara ọnụ ọgụgụ mmadụ ndị a ha na-emetụta usoro nri ma belata nri dịịrị ndị anụ buru ibu. Uzo ozo di egwu nye ndu na mmiri na oke osimiri a sitere n’ugwu Marsili. Ugwu a bụ ugwu mgbawa nke dị n’etiti oke osimiri a. Ndị ọkà mmụta sayensị ekpughere ụfọdụ ọmarịcha nchọpụta na-egosi anyị na mgbidi ugwu mgbawa nwere ike ịkwatu na-akpata mbufịt. Ọ bụrụ na ihe okike nke ịdị ukwuu a ga-eme na mpaghara ndị a n'ụsọ mmiri ọ nwere ike ibibi mmadụ niile.
N'etiti akpachapuru anya na-akụ azụ na bycatch E nwere ọtụtụ dolphin ndị na-anwụ anwụ, whale na mmekpa ahụ ndị a na-ahazi dị ka ihe egwu nke mkpochapụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Oke Osimiri Tyrrhenian.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke Osimiri Tyrrhenian